यो साता कतिले बढ्यो सुनको मूल्य ? | Sunaulo Nepal
यो साता कतिले बढ्यो सुनको मूल्य ?
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यो साता सुनको मूल्य प्रतितोला ८०० रुपैयाँले बढेको जानकारी दिएको छ । महासंघले साताभरमा आइतबारको तुलनामा शुक्रबारसम्ममा मूल्य बढेको जानकारी दिएको हो ।
आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ५०० रुपैयाँ थियो । जुन शुक्रबारसम्म आइपुग्दा ८०० रुपैयाँले बढेर ९७ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको छ । यसबीचमा तेजाबी सुनको मूल्य पनि तोलामा ८०० रुपैयाँ बढेको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघसुनको मूल्य